Ny tsirairay no erany… | NewsMada
Ny tsirairay no erany…
Ambony ny finoana, misy ny fanantenana ! Tsy niova ny isan’ireo nitondra ny valanaretina tao anatin’ny 24 ora. Tsy nisy tranga vaovao ihany koa tamin’ireo notilina… Vaovao lehibe izany! Tsy mba toy izany ny fivoaran’ny valanaretina Covid-19 any ivelany any. Andro vitsivitsy fotsiny toy izay nolalovantsika izay, efa maro ny tranga, indrindra efa maro ny maty. Ny eto amintsika kosa, mbola 19 aloha, hatreto, ny voatily fa mitondra ny aretina, saingy tsy misy tena ratsy fahasalamana loatra.
Mahavelombolo izany… Misy fanantenana ny haharesentsika ity areti-mandoza maneran-tany ity, tsy hisian’ny fatiolona sy ny takaitra amin’ny fahasalamana. Tsy mahazo mandihy tsy afa-tavony anefa. Tsy matanjaka no ho ireo firenen-dehibe mitondra takaitra mafy amin’izao fotoana izao isika. Ambinin’Andriamanitra kosa kanefa mila manaraka asa mafy ihany koa.
Eo no ilaina ny fahatongavan-tsain’ny tsirairay! Tsy andraikitry ny filoham-pirenena irery! Isaorana azy ny fampitam-baovao isan’andro, hanehoany fa misy mpitondra sy mpitantana eto Madagasikara. Tsy anjaran’ny mpanatanteraka eo anivon’ny governemanta ihany koa ka dia efa hita soritra eo amin’ny tavan’izy ireo ny harerahana noho ny tsy fahampian’ny torimaso. Fa indrindra indrindra, tsy anjaran’ny mpiasan’ny fahasalamana irery ity ady goavana ity.
Mila miara-miady ary miara-mandresy isika! Isika tsirairay anefa no erany… Tsy mila hoe mpanohitra sy mpanohana ny fitondrana. Fahavalo iombonana, ary fahavalon’izao tontolo izao, ny atrehina. Aleo i Madagasikara ho anisan’ireo firenena tsy ahitam-pahavoazana. Tsy tsotra, saingy tokana ny ahatongavana amin’izay: manaraka ny toromarika.
Farany, aleo ireo olona mpitondra ny “virus” hafa: mpandoto ny saim-bahoaka, mpamosavy malemy, mpanararaotra, mpamorika mpiray tanindrazana, mpandrava efa, mpanakivy ny miasa, sns, mba haka sisiny, azafady. Anareo ny anareo, atambaro any aminareo koa izay mety ho tsiny sy tody…